Nnụnụ nnụnụ Uche ọgụgụ isi - echiche maka ụlọ na ubi
Nnụnụ na-akwụ akwụ
06.01.2014 Bipụtara: Senti Art
Kedu ihe nwere ike ịbụ nri ụtụtụ ma ọ bụ nri abalị zuru oke ma ọ bụrụ na ịnwere ngwaahịa dị iche iche na-emekọ ihe ọnụ ma ị maghị etu ị ga-esi jeere ha ozi? N'ezie, achịcha bụ azịza nye ọtụtụ ajụjụ, na nke a, achịcha ọka wit nwere ike ịbụ ezigbo ngwọta. Echiche dị na ya bụ achịcha, àkwá, ham aokedụrọ, salad nduku, tomato cherry, chiiz, caramelized eyịm, galik, bọta, coriander ọhụrụ, nke enwere ike dochie ya na pasili.
Ofzọ nkwadebe: Bee ihe achicha site na ogbe achicha ma were mmanu kpuchie ime. Mmanụ nro, ị na-ete mmanụ n’ime ya ma detụ ire. Hazie nri n'ime oke ahọrọ na ngwakọta a họọrọ, ma tinye ya na oven nke ogo 200. Dabere na stovu ahụ, ị ​​nwere ike esi nri na fan ma ọ bụ jiri foil, na nkeji 10 tupu ị fesa ya na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, gbaji otu akwa na ime. Ije ozi na ihe ịtụnanya!
Ntụziaka ngwa ngwa, Ezi ntụziaka, salad nduku, ụta achịcha, ụta achịcha, ụta achịcha, ụta na nri, ụta na juju, ụta na akwa, mfe Ezi ntụziaka, nnụnụ na-akwụ akwụ, igbe juru, achịcha juru eju, achịcha juru eju, Ezi ntụziaka, mgwakota agwa Ezi ntụziaka, achịcha nri, akwa Ezi ntụziaka, chiiz, ham, яйца, nsen ke achịcha na-apụta, echiche maka ulo, ime ime, arịa ụlọ, n'ime ime, imewe echiche, ụlọ ọgbara ọhụrụ, icho mma, nka nka
Snowmen sitere na akwa
Echiche mara mma maka onye na-eri snowman. Eggs ga-achọ nsen esiri esi ...
Echo ekeresimesi icho mma
N'ime mmụọ nke ọdịnala nke ekeresimesi nyere iwu ka ọnụnọ nke ejiri mee achịcha, anyị kpebiri…
Stuffed pọpọ nke mgwakota agwa
Nke a bụ echiche ụtọ banyere ite nwere ike ịzụrụ nke ọma ...
Achicha ngwa ngwa ma di nfe
Ọtụtụ desserts ngwa ngwa, ma ọ bụ opekata mpe ndị dabere na ngwaahịa a rụchara, anaghị ekwe…
Akara achicha ngwa ngwa ma dị mfe emere n'ụlọ
Ice cream bụ otu n'ime ihe nri ndị a na-apụghị iguzogide edozi n'ime ọnwa anwụ. Ọ dịtụ mfe ...
Etu esi achọpụta etu akwa dị?
Etu ị ga - esi kpebie n’enweghi etu esi agba akwa bụ otu n’ime ndụmọdụ dị n’ịghọta ...
Echiche izizi maka icho mma nke Ista
Usoro a na - anọchite echiche ọhụụ ma dịkwa mfe maka icho mma nke Ista site na ịnyefe ...